ZVAKAITIKA Sun Master akawanikwa muna 1996. Vabatsiri vanosanganisira akawanda anozivikanwa F & B nemahotera emahotera, seGuangzhou Shanglian Thai Restaurant neLibya "A-one" Playcafe & Restaurant. Mushure memakore makumi maviri nemashanu ekukura, takave neruzivo rwakadzama, hunyanzvi hwehunyanzvi, hurongwa hwakakura. Mukuwedzera ...
Zvinoenderana neyako yekushongedza dhizaini Kunyange iyo fanicha inoshandiswa yekunze, asi zvakare inofanirwa kuenderana neyakaenzana ekushongedza maitiro kuita sarudzo. Kana iwe uchida kuisa seti yemidziyo yekunze pabharanda kana patio, iwe unofanirwa kufunga kuti ndeupi manyorero ako ekushongedza ari. Tichifunga kuti belo ...
Sun Master haisi chete OEM yekunze fanicha inogadzira ine makore anopfuura makumi maviri 'ruzivo rwegadheni fenicha mugadziri uye cafe chigaro mutengesi, asi hunyanzvi dhizaini fekitori inoramba ichitangisa anopfuura makumi matatu mamodheru mwaka wega wega. Tiri nyanzvi yepatio armrest cha ...
Zuva tenzi rinounza pamwe zvine hungwaru kusvika kune ruzivo rwekunze fenicha Ndosaka tichiedza kugadzira Sun tenzi fenicha inokwezva uye panguva imwechete yakasarudzika inokwezva, nekuda kwechimiro chayo uye zvishandiso zvinoshandiswa, munhu aigara achida kubata. ...
Bindu nebhokisi zvinogona kugadzira hupenyu hwakakwana hwenzvimbo yekunze. tinogara tiine hurongwa hwekuti: Ndichadyara mbeu dzakasiyana kana ndine gadheni, ndichichengeta Chitubu imomo nechiedza chezuva nemaruva. Kana, kana ndiine mashoma mativi yeyadhi, ndinoda ku ...